Institut Pasteur de Madagascar Olona 2152 no vita fitiliana PCR
KAMIAO TSY TOKONY HITATITRA OLONA
Tsy tokony hatao fiara fitaterana intsony ny kamiao, na inona na inona fanovàna natao taminy. Mbola voaporofo indray izany taorian’ny loza nahatsiravina izay niseho omaly maraina.
Lasa fahazarana fotsiny sisa
Ny fampahafantarana mialoha ny fandaharam-potoana ve no tsy ampy sa ny vahoaka mihitsy no tsy rototra amin�ny fanamarihana ny tsingerintaona nisian�ny tolom-panafahana tamin�ny 29 martsa 1947 ?
Raharison Thierry Homena toerana mendrika azy ny sarimihetsika Malagasy
Tapa-kevitra ankehitriny ireo mpandraharaha sy mpamokatra sarimihetsika Malagasy ny hamongotra ny piraty eto amintsika. Vahinin�ny gazety Tia Tanindrazana hitondra fanazavana ny mikasika izay anio ny tale jeneralin�ny �Office Malagasy du Cin�ma� Raharison Thierry. Resadresaka.
Ivelany sy anatiny
Efa azo ambara sahady fa milamina ny resaka eo amin�ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny sehatra iraisam-pirenena.
Hiova marina ve ?
Nandao an�i Etazonia omaly ary nihazo an�i Lafrantsa ka hihaona amin�ireo tompon�andraikitra ambony any indray manomboka anio ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Sao dia mampiesona e ?
Mba nanaitra ihany ilay filazan'ny filoha Rajaonarimampianina hoe tsy misy gadra politika intsony eto Madagasikara. Toa ny mampanahy ihany ny zavatra tahaka izany satria be loatra ilay kabary atao, fa toa tsy tena mifanaraka amin'izay akory ny zava-misy marina.
Ambarao ny tena marina
Miisa 2 152 ny fitiliana (PCR) vita hatry ny omaly teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar na ny IPM araka ny tatitra nentin’ny Pr Solofomalala Gaëtan Duval,
Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Olona efa nifampikasoka tamin’ilay otrikaretina Covid-19 izy ireo. Talohan’ny nahitana tranga Covid-19 voalohany teto Madagasikara, araka ny fanazavany hatrany, dia efa nisy fitiliana 80 natao, ary olona nahiahiana miisa 2 357 hafa nanaovana fanaraha-maso. Marihina fa isan’ny fomba nentina niady sy nisoroka ny coronavirus teto amintsika ny fanaovana fitiliana ireo olona tonga rehetra tamin’ny sidina an’habakabaka teo anelanelan’ny 11-19 martsa. Na izany aza nisy ny olona efa nanaparitaka coronavirus nialohan’izay na tao anatin’ireo olona tonga tamin’io fe-potaoana io. Miakatra hatrany noho izany ny antontan’isa.